CONRAD SANGMA (နိုင်ငံရေးသမား) အသက်၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊ ဘာသာတရား၊ - နိုင်ငံရေးသမား
Conrad Sangma (နိုင်ငံရေးသမား) အသက်၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊ ဘာသာတရား၊
နာမည်အပြည့်အစုံ Conrad Kongkal Sangma
အလုပ်အကိုင် နိုင်ငံရေးသမား, လူမှုရေးလုပ်သား, စီးပွားရေးသမား
နိုင်ငံရေးပါတီ အမျိုးသားပြည်သူ့ပါတီ (NPP)
နိုင်ငံရေးခရီး 2008-2013: Meghalaya ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်လာသည်
2008-2009: ဘဏ္Financeာရေး၊ ပါဝါနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအစိုးရအဖွဲ့ ၀ န်ကြီးဖြစ်လာသည်။ Meghalaya ၏
2009-2013: အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Meghalaya ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဖြစ်လာသည်
2016: ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၆ ကြိမ်မြောက် Lok Sabha ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
2018 ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်သူသည် Meghalaya ၀ န်ကြီးချုပ်၏ ၁၂ ကြိမ်မြောက်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက် Mukul Sangma
မွေးနေ့ 27 ဇန်နဝါရီ 1978
အသက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်ကဲ့သို့) နှစ် ၄၀
မွေးရပ်မြေ Tura, Meghalaya, အိန္ဒိယ
ဇာတိမြို့ Tura, Meghalaya, အိန္ဒိယ
ကျောင်း စိန့်ကိုလံဘတ်စ်၊ နယူးဒေလီ
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် လန်ဒန်, Imperial ကောလိပ်လန်ဒန်
Pennsylvania ပြည်နယ်, Philadelphia တွင်တက္ကသိုလ်
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း BBA (စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲမှု)
လိပ်စာ Walbakgiri, P.O. Tura, Distt ။ အနောက် Garo တောင်ကုန်း, Meghalaya
ဝါသနာ ဂစ်တာနှင့်စန္ဒရားတီးခြင်း၊ တေးဂီတနားထောင်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ၇ ဇွန် ၂၀၀၉
မိဘများ ဖခင် - နှောင်းပိုင်း Purno Agitok Sangma (နိုင်ငံရေးသမား)
အမေ - Soradini Kongkal Sangma
အစ်ကို James Sangma (နိုင်ငံရေးသမား)
နှမ Agatha Sangma (နိုင်ငံရေးသမား)
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် Mehtab Agitok Sangma
သမီး - အမ်ရာ
အကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံရေးသမား Narendra မိုဒီ
Net Worth ₹3ကုreေ
rajkummar rao အမြင့်
Conrad Sangma အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Conrad Sangma သည်ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။ မသိပါ
Conrad Sangma သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား။ မသိပါ
Conrad အား P.A. အဖြစ်သြဇာညောင်းသောနိုင်ငံရေးမိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည် သံာMeghalaya ၀ န်ကြီးချုပ်နှင့် Lok Sabha ဥက္ကaker္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကသူ၏ဖခင်ဖြစ်သူ P. A. Sangma အတွက်အမျိုးသားရေးကွန်ဂရက်ပါတီ (NCP) ၏နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်။
အသက် ၃၀ အရွယ်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Meghalaya ၏အသက်အငယ်ဆုံးဘဏ္Ministerာရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာသည်။
2013 ခုနှစ်တွင်သူ Selsella မဲဆန္ဒနယ်ကနေကွန်ဂရက်၏ Clement Marak ကမှ 2013 ခုနှစ်ညီလာခံရွေးကောက်ပွဲများဆုံးရှုံးပေမယ့်သူသည်မိမိအဘ၏ရုတ်တရက်နိဂုံးကိုပြီးနောက်, Tura ပါလီမန်မဲဆန္ဒနယ်မှအနိုင်ရပြီးနောက် 2016 ခုနှစ်တွင် 16 Lok Lok Sabha ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လာ၏။
သူသည်သမ္မတ၊ Meghalaya ခရစ်ကက်အသင်း၊ အားကစားအကယ်ဒမီနှင့် P.A. ဖြစ်သည်။ သံFoundationာ့ဖောင်ဒေးရှင်း။
သူ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်အမျိုးသားပြည်သူ့ပါတီ (NPP) သည် ၂၀၁၈ Meghalaya ညီလာခံရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၉ နေရာရရှိခဲ့ပြီး၎င်းနောက်ပါတီသည် BJP (2), UDP (6), PDF (4), HSPDP (2) နှင့် လွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် Meghalaya တွင်အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်သူသည် Meghalaya ၏ ၁၂ ခုမြောက် ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ကြီးတွေသူဌေး telugu2မဲပေး
sara ali khan ၏အမြင့်
abhishek bachchan မွေးနေ့
မွေး maneka ဂန္ဒီနေ့စွဲ